Fetsy hialana amin'ny fivadihan-kibo | Tontolo alika
La miolakolaka ny vavony amin'ny alika dia olana iray misy fiatraikany amin'ny karazany sasany noho ny hafa, satria misy predisposition fototarazo, fa amin'ny ankapobeny dia mety hitranga amin'ny alika rehetra izany. Ity olana ity dia azo sorohina amin'ny alàlan'ny torolàlana vitsivitsy vitsivitsy izay natao niaraka tamin'ny alika.
Ity olana ity koa zavatra matotra io, satria maro amin'ireo alika miaritra fanafihana an'io karazana io no maty. Ny torolàlana homenay anao dia tsara ihany koa ho an'ny alika handevon-kanina tsara kokoa ary hialana amin'ny olana hafa toy ny gastritis na tsy fahazakan-tsaina
La fivontosana vavony amin'ny alika dia mitranga izany rehefa mameno gazy ny vavony, mihalefaka ary miafara mihodina irery. Ity olana ity, rehefa miseho, dia tsy maintsy ampandehanana haingana hamonjy ny ain'ny alika, izany no antony olana lehibe ary tsy fantatsika akory mandra-pahatongany. Azontsika afangaro ny soritr'aretina sasany amin'ny tsy fihinanan-kanina, fa raha misy tsy mahazo aina dia tsy maintsy mandeha any amin'ny mpitsabo biby isika.
Ny iray amin'ireo zavatra lehibe tsy maintsy ataontsika mba tsy hijalian'ity alika ity ny olana dia ny fanomezana azy ireo anjara isan'andro nozaraina. Tompona maro no manome azy ireo sakafo indray mandeha monja, ao anaty lovia lehibe, nefa ity dia mankasitraka ny olan'ny vavony ary koa ny aretin-kibo. ny intakes tokony ho kely kokoa handevona azy ireo tsaratsara kokoa.
Mila misoroka azy tsy hisotro ianao rano be, mba tsy hiparitaka ny vavony. Ilaina ihany koa ny miala sasatra aorian'ny sakafo, ka ny fitsangatsanganana dia tokony alohan'ireny na aorian'ny fandevonan-kanina. Etsy ankilany, tsy tokony ho amin'ny toerana avo ireo lovia, satria aleony mivelatra ny vavony. Mikasika ny famahanana kosa dia tokony ho ao anaty baolina izy io ka tsy maintsy alika ny alika ny sakafony. Hanampy anao handevona tsara kokoa izany ary hisoroka ny entona manaparitaka ny vavony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Fetsy hialana amin'ny fivadihan'ny vavony
Ahoana no hiatrehantsika ny fahafatesan'ny alika?
Inona no fomba fiompy?